”Xasan Sheekh shalay wuxuu la hadlayey dad aan Soomaali ahayn!” – Salaad Cali Jeelle ma sheegay kuwa ay dadkaasi yihiin? | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Xasan Sheekh shalay wuxuu la hadlayey dad aan Soomaali ahayn!” – Salaad...
”Xasan Sheekh shalay wuxuu la hadlayey dad aan Soomaali ahayn!” – Salaad Cali Jeelle ma sheegay kuwa ay dadkaasi yihiin?
(Muqdisho) 21 Maajo 2020 – Siyaasiga Salaad Cali Jeelle ayaa ka hadlay arrinta Dacwadda Badda oo markii 3-aad dib u dhacday, iyada oo ay markasta codsiga baajinta lahayd Kenya oo markan ku marmarsootay cudurka karoonaha, taasoo uu sheegay ”inaysan ku farxin shacabka Soomaaliyeed.”
Jeelle ayaa deeto weerar ku qaaday hadalkii MH Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay DF ku eedeeyey inay si khaldan u wajahayso kiiska Dacwadda Badda.
Wuxuu sheegay in Xasan Sheekh uu bilowgii soo nooleeyey Heshiiskii Is-afgaradka (MoU) oo uu doonayey inuu xeer-jabab wax kula dhameeyo Kenya, balse sida lala socdo ay Kenya samaysay dhowr ballan baajis.
”Markii meel loo wado la waayey go’aankii Baarlamanka dartii, waxaa ugu dambayn khasab noqotay, amaba Ilaahay Xasan waafajiyey inuu dacwad geeyo Maxkamadda ICJ,” ayuu yiri Jeelle oo taa ku tilmaamay howl loo baahnaa, balse sheegay inuu hadda la yaabay warka Xasan Sheekh.
”Shalay waa dhegeystey, cidda uu la hadlayo ayaan fahmi waayey. Haddii ay Maxkamadda ICJ kiiska dib u dhigtay oo karoone u sababaysay, inuu (Xasan) inta iclaamka tago uu niyad-jab ku rido shacabka Soomaaliyeed looma baahayn,” ayuu raaciyay.
”Waxaad mooddaa inuu dad kale la hadlaayo. Dad kale, kolleey Soomaali la hadli mayn.” ayuu ku dooday Jeelle oo aan sheegin cidda diidmo ka muujiyey in qalqaalo siyaasadeed laga dhigto arrin qaran oo xasaasi ah.
Previous article6 su’aalood oo Xasan Sheekh & Shariif jawaab uga baahan kahor inta aaney KIISKA BADDA ku eedeyn MW Farmaajo!! (Akhri)
Next articleTurkish Airlines oo wax ka bedeshey goorta ay bilaabayso duullimaadyada & 19 dal oo ay ku bilaabayso (Somalia maku jirtaa?)